‘अबको तीन वर्षमा फूलमा पूर्ण आत्मनिर्भर हुन्छौं’ spacekhabar
‘अबको तीन वर्षमा फूलमा पूर्ण आत्मनिर्भर हुन्छौं’ विश्वमणी पोखरेल महासचिव, फ्लोरिकल्चर एशोसिएशन नेपाल
स्पेसखबर काठमाडौं, १३ कात्तिक
नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड तिहारलाई ‘फूलको पर्व’ पनि भन्ने गरिन्छ । घर सिँगार्न र दाजुभाइदिदीबहिनीलाई लगाउन प्रयोग गरिने भएकाले विशेषगरी यो पर्वमा फूल र मालाको बढी माग हुन्छ । र, यस्तो माग बर्सेनि बढ्दै गएको छ । गत वर्ष १५ लाख मालाको माग भएकोमा यसवर्ष २२ लाख मालाको माग रहेको फ्लोरिकल्चर एशोसिएशन नेपालले जनाएको छ । जसमध्य १५ लाख सयपत्रीका र ७ लाख मखमली फूलका माला बजारमा पुग्ने जनाइएको छ । थोकमूल्य कम्तीमा ५० रुपैयाँ तोकिदा उपभोक्ताले एउटा मालाको मूल्य ६० देखि ७० रुपैयाँसम्म तिर्नु पर्नेछ । गतवर्ष ५० देखि ६० रुपैयाँसम्ममा माला किनमेल भएको थियो । काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा बढी ४० प्रतिशत माला खपत हुने छ । तिहारकै सेरोफेरोमा फ्लोरिकल्चर एशोसिएशनका महासचिव विश्वमणि पोखरेलसँग स्पेसखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तिहारको तयारी कस्तो छ ?
तिहारमा फूलको माग अत्याधिक हुने गर्छ । त्यसका लागि हामीले तयारी गरिरहेका छौं । नेपालीको ठूलो चाड दशैं र तिहार हुन् । दशैंमा फूलको माग नहुने भए पनि तिहारमा अत्याधिक मात्रामा माग हुने गर्छ । उपभोक्ताले तिहारमा आवश्यक पर्ने फूलहरु सहजै किन्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले मेला आयोजना गर्ने गरेका छौं । तिहारमा विशेषगरी सयपत्री र मखमली मालाको बढी खपत हुने भएकाले त्यसको व्यवस्थापनमा हामी लागिपरेका छौं।
स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने मालाबाहेक अपुग माला भारतबाट ल्याउने गरिन्छ । संस्थाले आफैँ मालाहरु किन्ने र बेच्ने त गर्दैन तर पनि बजारको मागअनुसार हामीले समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा पुष्प व्यवसायको स्थिति कस्तो छ ?
यो व्यवसाय बर्सेनि बढ्दो क्रममा छ । हरेक वर्ष १० देखि १५ प्रतिशतले पुष्प व्यवसाय बढ्दो क्रममा रहेको आँकलन गरेका छौं । यसैगरी उत्पादन पनि वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा वार्षिक १ अर्ब ८६ करोडको कारोबार पुगेको छ । जसमध्ये ११ करोडको पुष्प आयात गरिएको छ । आयातको दर प्रतिबर्ष घट्दै गएको छ । यही हिसाबले हेर्ने हो भन े अबको दुई–तीन बर्षमा हामी पुष्पमा पूर्णरुपमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं । यसैगरी पुष्प व्यवसायमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरि झण्डै ४३ हजारभन्दा बढी मानिसले रोजगारी पाएका छन् ।
तिहारमा सयपत्री र मखमलीका मालाहरु बढी प्रयोग हुन्छन् । यसको उत्पादकत्व कस्तो छ ?
तिहारमा बढी खपत हुने भनेका सयपत्री र मखमलीका माला नै हुन् । अहिलेको तिहारमा २२ लाखा माला खपत हुन्छन् भन्ने हाम्रो आँकलन छ । यी भनेका व्यवसायिक माला हुन् । अझ गाउँघरतिर आफैँले उत्पादन गरेर प्रयोग गर्ने मालाको हिसाब गरिएको छैन ।
यसवर्ष माग हुने २२ लाख मालामध्ये १५ लाख माला सयपत्री फूलका हुन् । तीमध्ये १२ लाख माला नेपालकै हुन् भने ३ लाख माला भारतबाट आयात गर्नुपर्छ । नेपाल मखमली फूलमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । मखमली माला हामी आयात गर्दैनौं । बरु निर्यात गरिरहेका छौं । माला काठमाडौं उपत्यकाका जिल्ला, यस वरपर र तराईका जिल्लाबाट पुर्ति हुने गर्छ ।
तिहारमा एउटा मालाको मूल्य कति पर्छ ?
अगाडिका बर्षहरुमा भएको कारोबारका हिसाबले यसबर्षको मूल्य निर्धारण हुन्छ । भारतबाट आउने माला सरदर कतिमा आइपुग्छ त्यसका आधारमा मूल्य तय हुन्छ । हामीले छलफल गरेअनुसार तिहारमा एउटा सयपत्री फूलको मालाको थोक मूल्य कम्तिमा ५० रुपैयाँ हुन्छ । यो नै अन्तिम मूल्य भने होइन । किनभने सयपत्री माला मौसमले पनि प्रभाव पार्छ । मौसम तलमाथि हुनेबित्तिकै गुणस्तर घट्ने हुन्छ र त्यसले सिधै मूल्यमा पनि असर गर्छ ।
तिहार पर्व ढिला हुँदा व्यवसायमा कस्तो प्रभाव पार्यो ?
तिहार पर्व अगाडि पछाडी हुँदा पुष्प उत्पादकहरुलाई धेरै प्रभाव पार्छ । गत बर्ष तिहार चाँडै भएकाले समयमै सयपत्री फूलका माला बजारमा आउन सकेनन् । गतबर्ष धेरै भारतबाट आयात गर्नुपरेको थियो । अहिले १ हप्ता ढिला तिहार हुँदा सबै फूल फुलिसक्यो । अहिले कोल्डस्टोरमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले अब किसानहरुले पनि सयपत्री फूल लगाउँदा क्यालेण्डर हेरेर लगाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । कम्तीमा सयपत्री फुल्न ७० देखि ९० दिन लाग्ने भएकाले त्यसैअनुसार क्यालेण्डर बनाउनु पर्छ ।
विगत र बर्तमान आयातको अवस्था कस्तो छ ?
झण्डै १२ बर्ष अघि ८० प्रतिशत पुष्प आयात गर्ने अवस्थामा थियौं । यहाँ यसको व्यवसायिक उत्पादन एकदमै कम थियो । जसले गर्दा त्यतिबेला धेरै फूल भारत लगायतका देशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो । तर अहिले अवस्था फेरिएको छ । अहिले हाम्रै देशमा उत्पादन भएको पुष्पले नेपाली बजारकोे ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । अहिले हामी २० प्रतिशतमात्रै आयात गर्छौ । अझ भनौं २० प्रतिशत आयात भनेको एक्कासी माग बढ्ने समयमा मात्रै हामीले वाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने हो । अरुबेला नेपालकै पुष्पले यहाँको बजार थेग्छ ।
नेपालमा पुष्पको व्यापारिक चेन कस्तो छ ?
यसमा दुई–तीन वटा पक्ष छन् । नर्सरी व्यवसाय गर्नेहरुले आफैँ उत्पादन गरेर आफै मार्केटिङ गर्नुहुन्छ । ‘कट फ्लाओर’ का लागि काठमाडौंमा ५ वटा होलसेल पसल छन् । उत्पादकहरुले होलसेलर र होलसेलरले रिटेलिङलाई बेच्छन् । आयात गर्नेहरुले पनि रिटेलरलाई र मठ मन्दिरमा लगेर पनि बेच्नुहुन्छ ।
नेपालको मखमली विदेश पनि पठाउनुहुन्छ ?
हो, नेपालको मखमली फूल हामी बाहिर पनि पठाउँछौं । विदेशमा बस्ने नेपालीले मखमली फूलको बढी माग गर्नुहुन्छ । खासगरी अष्ट्रेलियामा यसको माग बढी छ । त्यसैगरी खाडी मुलुकमा बस्ने नेपालीले पनि मखमली फूलको माला बढी माग गर्नुहुन्छ । हामीसँग आधिकारिक डाटा त छैन तर पनि नेपालको मखमली फूलको माला झण्डै डेढदेखि २ लाख माला निर्यात हुन्छ अनुमान छ ।
पुष्प व्यवसायमा सरकारको सहयोग कति छ ?
पुष्प व्यवसायलाई नै प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले २०६९ सालमा ‘पुष्प प्रवद्र्धन नीति’ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको थियो । त्यसैका आधारमा ५ वर्षे कार्ययोजना बनेको थियो । कार्ययोजनामा यसका स्टेकहोल्डरले गर्ने कामहरुको बर्गीकरण गरिएको थियो । तर स्टेकहोल्डरबाट त्यति काम भएन । त्यसमा झण्डै ३७ करोडको बजेट अनुमान गरिएको थियो । जसमा जम्मा ८ करोड मात्रै खर्च भयो । त्यो अगाडि बढ्न सकेन । फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल (फ्यान) ले प्रवद्र्धनको काम गर्यौं । अरुले गरेनन् । अहिले संघीयता कार्यान्वयन भइसके पछि सरकारले हामीलाई सहयोग गरेको छैन ।
अन्त्यमा, फ्लोरिकल्चर एशोसिएशन नेपाल केमा व्यस्त छ ?
पुष्प व्यवसायीको हकहित र प्रविधि विकासको काममा एशोसिएसन अगाडि बढिरहेको छ । व्यवसायीका इच्छा चाहनाअनुसार प्रविधिको विकासको काम अगाडि बढाईरहेका छौं ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक १३, २०७५, ०२:४८:००